Hla Than | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: Hla Than
သုညမျိုးဆက်﻿ (ဂစ်﻿တာတစ်﻿လက်﻿ရဲ့ နာ﻿ရေး) (လှသန်း)
လပြည့်﻿ညတစ်﻿ည ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ ကြယ်﻿တစ်﻿ပွင့်﻿ ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ သစ်﻿ပင်﻿တစ်﻿ပင်﻿ ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ ဖန်﻿ခွက်﻿တစ်﻿ခွက်﻿ ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ အိမ်﻿တစ်﻿အိမ်﻿ ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ လက်﻿ဖက်﻿ရည်﻿ဆိုင်﻿တစ်﻿ဆိုင်﻿ ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ လမ်းမတစ်﻿ခု ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ ﻿ရေတွင်းတစ်﻿တွင်း ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ ရုပ်﻿ရှင်﻿ရုံတစ်﻿ရုံ ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ ရပ်﻿ကွက်﻿တစ်﻿ခု ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ ﻿ဈေးတစ်﻿﻿ဈေး ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ ဘဏ်﻿တိုက်﻿တစ်﻿တိုက်﻿ ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ လူတစ်﻿﻿ယောက်﻿ ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ လူတစ်﻿စု ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ သင်္ချိုင်းကုန်းတစ်﻿ခု ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။ ကဗျာဆရာတစ်﻿﻿ယောက်﻿ ကွယ်﻿လွန်﻿သွားသည်﻿။
(သရဖူ – ဇွန်﻿၊ ၁၉၉၇။)
Categories: Kabyarz | Tags: 100 poems and decease of the poet, လှသန်း, ကြည်﻿﻿မောင်﻿သန်း, Hla Than, Kabyarz, Kyi Maung Than | Permalink.
ရုတ်﻿တရက်﻿ ﻿ဂေါ်ဘာ﻿ချော့ဗ်﻿၊ ဘာလင်﻿တံတိုင်းနဲ့
Categories: Kabyarz | Tags: 100 poems and decease of the poet, လှသန်း, ကြည်﻿﻿မောင်﻿သန်း, Hla Than, Kabyarz, Kyi Maung Than | Permalink.
ကျွန်﻿﻿တော့်﻿ကို အဲဒီလို ﻿ပြောပြဖူးတယ်﻿။ ။
(Fashion Magazine – ဒီဇင်﻿ဘာ၊ ၂၀၁၁။)
Categories: Kabyarz | Tags: လှသန်း, ကြည်﻿﻿မောင်﻿သန်း, Hla Than, Kabyarz, Kyi Maung Than | Permalink.
Categories: Kabyarz | Tags: လှသန်း, Hla Than, Kabyarz, lanolay | Permalink.
ကိုယ့်ဖိနပ်ဟာ ကိုယ့်ခံတပ်ပါပဲ (လှသန်း)
ထောင်ချောက်ကို လိုက်ရှာနေတဲ့သားကောင်ဆိုတာ ရှိပါ့မလား
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ လှောင်အိမ်ထဲမှာ မမွေးဖွားဘူး
လှသန်း (စ – ဆုံး) (မောင်ယုပိုင်)
သွားဖို့ရာ သံသရာ အဆင်သင့်
နားဖို့ရာ ခန္ဓာကိုယ် အဆင်သင့်။
ဒီဘ၀အတွက် မလေးရှားမှာ ကားရေဆေးတယ်
ဒါဟာ ကျွန်တော်နဲ့လောကကြီး ဆက်ဆံရေးပါပဲ။
(လက်မောင်းသွေးကို ဖောက်ကြည့်ခြင်း (၁) မှ)
မြန်မာကဗျာတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်ဖို့
(လက်မောင်းသွေးကို ဖောက်ကြည့်ခြင်း (၂) မှ)
(လက်မောင်းသွေးကိုဖောက်ကြည့်ခြင်း ၁ မှ)
ငါတို့မျိုးဆက်ရဲ့ အသံကို ထွင်းထုလိုက်မယ်
တစ်ချိန်မှာ မတန်တဆ အနစ်နာခံမှုတွေ
(လက်မောင်းသွေးကို ဖောက်ကြည့်ခြင်း (၃) မှ)
(လူသားဆန်ချင်တာ တရားတယ် မှ)
လက်မရွံ့ကဗျာ UG စာအုပ်ထဲမှ စာသားများ မောင်ယုပိုင်မှ ဆက်စပ်ဖေါ်ပြသည်။
Source: MgYuPie @Facebook
▀■ Related Link
• ကျွန်တော်တို့ရှေ့က ကဗျာဆရာ (မိုးဝေး)
• လှသန်း @Lanolay
Categories: Kabyarz, Lyric Poetry | Tags: လှသန်း, မောင်ယုပိုင်, ရေးသူခံစားမှုဗဟိုပြုကဗျာ, Hla Than, Kabyarz, Lyric Poetry, maung yu py | Permalink.
ကျားနာတစ်ကောင်ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ (လှသန်း)
(ရွှေမော်ကွန်း – ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၃)